Sawirro+Madaxweynaha Maamulka Puntland oo Kormeeray Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Garoowe. – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa uu soo kormeeray Garoonka diyaaradaha Gen. Maxamed Abshir Airpot ee magaalada Garoowe kaas oo nashqadaytiisa iyo qurxintiisu marayso heer gabogabo ah lana filaayo in maalmaha in dhawaan lasoo gabagabeeyo.
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kormeerkiisa uu ku tagay garoonka diyaaradaha Gen. Maxamed Abshir Airpot ayaa waxaa ku wehelinaayey, Wasiiro, xildhibaano, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Maamulka Puntland iyo masuuliyiin kale.
Dhinaca kale garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada Garoowe ayaa waxaa dhismihiisa gacanta ku haya shirkad laga leeyahay waddanka Turkiga, shirkadaas oo garoonka u dhistay qaab farshaxankiisu aad u heersareeyo, welibana si weyn looga baaraan degay qaabka dhismaha dhabaha diyaaraduhu ka haadaan.
Sidoo kale MadaxweynahaMaamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa mudadii uu ku guda jiray kormeerkiisa ayaa waxaa uu kormeer ku sameeyey dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay garoonku, isla’marahaantaana waxaa uu socod dheer ku maray dhabaha diyaaradaha isagoo indha indhaynayey qaabka loo dhisay dhismaha wadada iyo gebi’ahaanba dhismayaasha Garoonka uu ka kooban yahay.
Ugu danbeyn Madaxweynaha Maamulka Soomaaliyeed Puntland Dr. Cabdiweli Mohamed Cali Gaas ayaa waxaa uu kormeerkiisii Garoonka uu kusoo gabagabeeyey qaybta dejinta iyo rarka xamuulka diyaaradaha, halkaas oo lagu soo bandhigay agabka socodsiinta shaqada oo ahaa mid casriya oo loogu talagalay in si dhamaystiran loogu hawl galo.
Uhuru Kenyatta oo tacsi u diray Qoysaskii ay ka baxeen Askar ku dhimatay qarax ka dhacay Dhoobleey